Imigaqo nemiqathango kunye noMgaqo-nkqubo wabucala-Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Isivumelwano malunga nokuSebenza kwale Webhusayithi
Le webhusayithi ye-Intanethi ibonelelwa njengendlela yonxibelelwano, imfundo, ukuphefumlelwa kunye nolwazi. Indawo le inayo kwaye iqhutywa yi-Countdown to the Kingdom.
Yonke impahla ekule webhusayithi, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho, imixholo, ukubhala, imifanekiso, kunye nekhowudi yecompyuter kunye nokusetyenziswa, kukhutshelwe ilungelo lokushicilela kwi-Countdown to the Kingdom okanye ngumntu wesithathu.
Unokuzikhuphela izixhobo kule ndawo uyisebenzisela wena, ukusetyenziswa kwezorhwebo kuphela, ngokuxhomekeka ekubeni onke amalungelo obunini kunye nezinye izazisi ezinxulumene nezinto ezikhutshelweyo ziyagcinwa. Akukho nanye yezi zixhobo enokugcinwa kwikhompyuter ngaphandle kokuba isetyenziselwa ubuqu kunye nokungathengisi ezorhwebo.
Awunako ukuguqula, ukukopa, ukuphinda uvelise, ukuphinda upapashe, ukulayisha, ukuphinda, ukuhambisa, ukuhambisa, isakhelo, okanye ukuphinda usebenzise nayiphi na into evela kule webhusayithi, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, ikhowudi, isoftware, isicatshulwa, imifanekiso, iilogo, ividiyo kunye / okanye iaudio, ngayo nayiphi na indlela ekhoyo okanye engekenziwa.
Izithintelo ezikhethekileyo ekusetyenzisweni kweMathiriyeli
Kuya kufuneka uhloniphane zonke iimpawu zorhwebo, amalungelo obunikazi, uphawu lwenkonzo, iilogo, kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza kuyo yonke ipropathi yelungelo lokuqonda kule webhusayithi, nokuba ngaba ziimpawu zentengiso, amalungelo obunini, iilogic uphawu, iilog, okanye amalungelo awodwa obunini okanye iimpawu zingobunini bePassage eBukumkanini, okanye zinelayisensi evela iqela lesithathu. Awunakusebenzisa nayiphi na kwezi logo, uphawu lwentengiso, uphawu lwe-servicements, amalungelo awodwa omenzi wechiza, okanye umxholo wale webhusayithi ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yokuBala ukuBukumkani.
Amalungelo anikezwe uKumkanikazi woXolo
Ukuba uthumela okanye ufake imiyalezo, izimvo, idatha, kunye / okanye iingcebiso ezihambelana nokuBala kweBukumkanini ukuya kwenye yoenkonzo okanye enye yeenkonzo zethu okanye iimveliso, ngokwenjenje unikezela onke amalungelo obunini obunokuthengiswa kuloo nto ukuya kuthi ga eBukumkanini. Izixhobo ziya kuthathwa njengezingekho mthethweni, kwaye ukubala ukuya eBukumkanini kunokusebenzisa naziphi na izimvo, izimvo, kunye nobunini bayo nayiphi na indlela ayikhethayo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga ekuvelisweni kwakhona, ekubhengezeni nasekushicileleni ngalo naluphi na uhlobo olukhoyo okanye olusele lukhona. iyile.
Amalungelo anikezelweyo ayinamsebenzi wasebukhosini, ayinasiphelo, ayinakuphikiswa, kwaye ayithintelwanga, kwaye ibandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, ilungelo lokufumana ilayisenisi, ukuthengisa, ilungelo lokushicilela, uphawu lwentengiso, i-servicemark, kunye nelungelo elilodwa lomenzi.
Inkqubo yabucala kunye noMgaqo-nkqubo
Ukuba ubonelela nge-Countdown eBukumkanini ngedilesi ye-imeyile ukuze ubhalisele i-Countdown kwincwadana yeendaba, i-Countdown eya eBukumkanini iya kusebenzisa i-imeyile yakho kuphela ekukuthumeleni incwadana. Umgaqo-nkqubo wokuBala uBukumkani ayikokubonelela ngedilesi ye-imeyile okanye kulwazi kuye nawuphi na umntu wesithathu.
Ukubala ukuya eBukumkanini kunokubonelela ngekhonkco kwiwebhusayithi zomntu wesithathu, okanye khankanya iiwebhusayithi ze-Intanethi ezigcinwe ngumntu wesithathu. Xa usebenzisa le webhusayithi okanye nayiphina iwebhusayithi edibeneyo okanye ekhankanyiweyo kule webhusayithi, uyenza ngomngcipheko wakho. Ukubala ukuya eBukumkanini akusebenzi okanye kulawula ezi ndawo zangaphandle, kwaye ke akukho kwenza siqinisekiso, kubonisiweyo okanye kubonisiweyo, malunga naziphi na izinto ezifumaneka kwezi siza.
Ukubala ukuya eBukumkanini akuqinisekisi ukuba le webhusayithi, izinto zayo, okanye imisebenzi yazo ayizukuphazanyiswa okanye ingenasiphoso. Ukubala uBukumkani akuqinisekisi ukuba le webhusayithi okanye nayiphi na iwebhusayithi enxibelelana nale webhusayithi okanye ikhankanyiweyo kule webhusayithi ayinazintsholongwane okanye ezinye izinto eziyingozi.
Akuyi kubakho kwimeko iya kuthi abahlangeneyo be -downdown kwi-Kingdom, okanye naliphi na iqela lesithathu elincedileyo ukuyila, ukuvelisa, ukuhambisa, okanye ukuqhuba le webhusayithi, babenoxanduva lwalo naluphi na umonakalo ongqalileyo, ngokungathanga ngqo, ngokwenzekileyo, okhethekileyo, okanye ngenxa yomonakalo obangelwe kukusetyenziswa. ye, okanye ukungakwazi ukusebenzisa iClouddown kwiwebhusayithi yoMbuso okanye izinto zayo, nasiphi na isizathu, kubandakanya nokungakhathali. Ngokusebenzisa le webhusayithi uvuma ngokungqalileyo kwaye uyavuma ukuba ukubala uBukumkani akubophelelekanga kuyo nayiphi na indlela yokuziphatha kwakhe nawuphi na umsebenzisi. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma kwaye uyavuma kuyo yonke imigaqo yesi siVumelwano.
Ukuba naluphi na ubonelelo lwesi siVumelwano sibanjwa ngokungekho mthethweni, loo nto ingasebenziyo ayinakuchaphazela loo malungiselelo anokunikwa ngaphandle kokusebenza njengenxalenye engekho mthethweni.
Esi siVumelwano kufuneka silawulwe kwaye sinyanzeliswe ngokwemithetho yeLizwe laseCalifornia, kwaye indawo kuyo nayiphi na into ebangela isenzo iya kuba yi-Sacramento County, California.